Lalàna Tamin’ny Andron’ny Tsar no Entina Handrarana ny Votoaty Vetaveta ao amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Lalàna Tamin'ny Andron'ny Tsar no Entina Handrarana ny Votoaty Vetaveta ao amin'ny Aterineto
Mpanoratra Will Wright Nandika (ru) i Natalia Safonova, Miriam Palisson, Raveloaritiana Mamisoa
Voadika ny 07 Mey 2015 19:18 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Català, Italiano, Français, Español, English
Tabilaon'i Ivan Répine “Ivan ilay mampatahotra mamono ny zananilahy” ahitana ilay mpilalao sarimihetsika vetavetamamoafady teo aloha Sacha Grey. Sary namboarin'i Kevin Rothrock.
Nanambara i Vladimir Putin indray andro hoe: ny antsasaky ny zavatra hita ao amin'ny aterineto dia tsy inona fa “sary vetaveta”. Nampiseho araka izany ny fianarana akademika lehibe tamin’ny 2010 fa raha ny tena marina, 4%n'ny habaka ihany no azo heverina fa vetaveta. Tsy iadian-kevitra fa natokana hoan'ny olon-dehibe ny ankamaroan'ny votoaty azo jerena ao amin'ny aterineto.
Raha manaraka ny lalany ny rafi-pitsarana Rosiana dia ho foana vetivety isan'ny tranonkala vetaveta ara-dalàna. Ary izany indrindra no mitranga: nandràra tranokalam-betaveta 136 ny fitsarana rezionaly ao Tatarstan, ary nilaza ny didy fa tsy ara-dalàna ny fandefasana sary mamohafady ao amin'ny aterineto.
Tamin'ny 13 Aprily 2015, nanoratra ny gazety “Izvestia” (rosiana) fa nangataka tamin'ny Roskomnadzor, mpanaramaso ny haino aman-jery ny fitsarana rezionalin'i Apastovo, ao Tatarstan mba hanampy isa ireo tranonkala 136 ao anaty lisitra mainty raha mbola tsy namafa ireo votoaty vetaveta rehetra ao amin'ny pejiny tao anatin'ny telo andro izy ireo. Ahitana ny xHamster, iray amin'ireo tranokalam-betaveta malaza indrindra manerantany ny lisitra.
Nandefa fitarainana tany amin'ny fitsarana ny fampanoavana ao an-toerana izay mitaky ny fanakatonana ireo tranokalam-betaveta rehetra, ary ny notononiny dia fifanekena iraisampirenena manjavozavo efa tamin'ny fiandohan'ny taonjato faharoapolo, araka ny filazan'ny “Izvestia”.
Voalohany, nanamarika ireo mpampanoa lalàna fa araka ny Lalampanorenana dia anisan'ny mandrafitra ny Lalampanorenana Rosiana ny fifanarahana iraisampirenena, ary laharam-pahamehana amin'ny lalàna ao amin'ny firenena raha misy ny fifandroritana, hoy izy ireo nandresy lahatra tamin'ny fomba tsy ortodoksa. Notononin'ny Fampanoavana ihany okany Fifanekena Iraisampirenena ho fanenjehana ny fivezivezena sy ny famarotana votoaty vetaveta, nosoniavina tao Paris tamin'ny 1910, sy ny fifanekena tao Genève tamin'ny 1923 izay mandrara ny famokarana sy fampielezana votoaty vetaveta.
Mazava ho azy fa nosoniavina tamin'ny vanim-potoana nitondran'ny Tsar (mpanjaka tao Rosia talohan'ny revolisiona komonista) sy ny Firaisana Sovietika avy eo ireo fifanekena ireo, ary araka ny filazan'ny fitsarana ao Apastovo, dia mbola voafehin'ireo fifanekena ireo i Rosia amin'izao fotoana izao.
Araka ny voalazan'ilay mpamokatra sarimihetsika “natokana hoan'ny olon-dehibe” iray dia somary manjavozavo ny lalàna Rosiana eo amin'ny sehatry ny sary vetaveta. Ny lalàna tokana momba ny famoahanana boky vetaveta dia ny lalàna andininy faha-242 ao amin'ny Fehezan-dalàna Famaizana Rosiana, izay mamaritra ny lafiny tsy ara-dalàna amin'ny famoahana boky sy sary vetaveta, saingy ankoatra io, dia tsy misy ny lalàna mamaritra ny dokam-barotra, fitsinjarana ary ny varotra eo amin'ity sehatra ity.
Noho izany, inona ireo fepetra nofinidin'ny fampanoavan'i Tatarstan nampidirana ireo tranonkala 136 ireo tao anatin'ny lisitra maintin'ny Roskomnadzor? Toa mivandravandra fa nitendry ny teny “mpivarotena ao Kazan” sy “porno video” tao amin'ny Yandex [milina fikarohana malaza indrindra ao Rosia, mitovy amin'ny Google] fotsiny ny mpampanoa lalàna. Avy eo ny manampahaizan'ny sarimihetsika ao amin'ny Minisiteran'ny Kolontsaina nanamafy fa nahitana votoaty mamoafady tokoa ireo habaka voalaza ireo.
Na izany aza, tsy mbola fantatra raha hanakatona ny fidirana amin'ireo habaka ireo manerana ny firenena Rosiana ny Roskomnadzor na ao Tatarstan fotsiny . Tsy fantatra ihany koa raha hanakatona fotsiny ireo habaka 136 ireo ny Roskomnadzor sy ny Fitsarana Apastovo, na hanatontosa hetsika goavana hanoherana ireo habatranokalam-betaveta an-tapitrasany hafa.
Na izany aza, dia io no fizarana farany amin'ny andiam-panaraha-maso ny aterineto, izay mahazo vahana hatramin'ny fiverenan'i Vladimir Putin tao Kremlin tamin'ny taona 2012. Ho an'ireo mpiserasera aterineto Rosiana sasany, tahaka ilay mpiangaly mozika Sergei Chnourov, ampy nandravana ny fahafinaretana amin'ny votoaty vetaveta ny fehim-potoam-piasana fahatelon'i Putin eo amin'ny fitondrana, ary tsy misy ifandraisany amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana izay hivoaka ao Tatarstan izany:
— Собака Шнурова (@YaTebyaEbal) March 10, 2015
Mijery tele, mahita Putin, mihaino radio, mandre Putin, amin'ny aterineto mbola Putin ihany. Mazava loatra fa tsy sahy intsony aho ny hijery votoaty vetaveta sao…
Nandika (ru) i Natalia Safonova
Nandika (fr) i Miriam Palisson
Azia Atsinanana 11 ora izay
Eoropa Afovoany & Atsinanana 12 ora izay
Eoropa Afovoany & Atsinanana 1 andro izay